Guud ahaan marka laga hadlayo, waxaan soo iibsanaa nadiifiyeyaasha guryaha si ay u nuugaan qashinka, laakiin dhab ahaantii, waxyaabo badan lama nuugi karo, oo waxaa suuragal ah inaadan si fiican u aqoon. Marka maanta waxaan ka wada hadli doonnaa waxa aan nuugi karin nadiifiyaha faakiyuumka. Xusuusnow inaad fiiro gaar ah u yeelatid oo ha ku samayn wax waxyeelo u leh nadiifinta faakiyuumka.
Inta badan nadiifiyeyaasha faakiyuumka aan hadda isticmaalno waa faakuumbo gacanta lagu haysto. Dhamaanteen waan ognahay in nadiifinta gacmaha lagu nadiifiyo aysan qaadi karin dareeraha, oo ay kujiraan qashinka jikada iyo qashinka qoyan. Waxay kaliya nuugi karaan qashinka qallalan. Si kastaba ha noqotee, nadiifiyaha baaldiiga ayaa soo nuugi kara dareeraha, kaas oo aad ugu habboon aag ballaaran ama qashin badan oo guriga yaal.
Ta labaadna waxay tahay in mashiinka faakiyuumku gacanta ku haysto aanu nuugi karin walxaha birta ah. Midi waa inay xoqdo koobka boodhka, tan kalena waxay tahay inay ku wareegi doonto dhererka koobka boodhka, taas oo saamayn ku yeelan karta waxyeelada shaashadda shaandhada oo sababi karta in faakiyuumka guriga ka shaqeeya aanu caadi u shaqeyn.
Ta saddexaad waa walxaha waaweyn ee walxaha. Tuubooyinkeennu waa cidhiidhi yihiin oo way yar yihiin. Walxaha walxaha waaweyn way xannibi doonaan tuubooyinka. Midda labaad waxay tahay inaysan ku wareegi karin xawaare sare markay nuugaan. Si kastaba ha noqotee, nadiifiyeyaasha faakiyuumku waxay nuugi karaan qaar ka mid ah lowska iyo maqaarka iniinyaha qaraha, taas oo ah wax aad ugu xoog badan nadiifiyaha faakiyuumka guryaha.
Faakiyuumlayaasha wax ma nuugi karaan. Ma fahantay Maanta, badanaa waxaa loogu talagalay nadiifinta faakuumka gacanta. Hadday tahay noocyo kale oo faakiyuum lagu nadiifiyo, way ka duwanaan kartaa, markaa fadlan xusuusnow inaad aragto faahfaahinta markii aad iibsaneysid.